नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो, नेपाली भान्छा महँगिने, विनिमय दर परिवर्तन होला? :: BIZMANDU
नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो, नेपाली भान्छा महँगिने, विनिमय दर परिवर्तन होला?
प्रकाशित मिति: Jul 6, 2018 9:54 AM
काठमाडौं। अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको रिफ्रेन्स रेट ११० रुपैयाँ ६२ पैसा तय गरेको छ। पाँच दिनयता ११० रुपैयाँमाथि रहेको डलरले शुक्रबार सबैभन्दा महँगो किर्तिमान कायम गरेको हो।
भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा डलर महँगिएर नेपाली रुपैयाँ सबैभन्दा सस्तो स्तरमा झरेको हो। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय मुद्राबीच स्थितर बिनिमय दर छ। नेपाली १६० रुपैयाँ बराबर भारु १०० रुपैयाँ छ। यही कारण भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि सस्तिन्छ। एक डलर बराबर ६८.९५ भारु तय भएको छ।
बर्ष दिनमा नेपाली रुपैयाँ डलरभन्दा सात प्रतिशतले थप कमजोर भएको हो। डलर बलियो हुँदै जाँदा नेपाली भान्छा महँगिन्छ। विगतमा डलर महँगिदा भारुसँगको विनिमय दरका बारेमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवाज उठेको थियो।
अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डलर ११० रुपैयाँ २८ पैसासम्म पुगेको थियो। त्यसबेला विनिमय दर पुनरावलोकनको मुद्दा उठेको थियो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यस बारेमा प्रश्न उठाउँदा तत्कालिन गभर्नर खतिवडाले- तीन वटा सर्त पुरा नभइ विनिमय दर पुनरावलोकनको बिषय उठाउन जायज नहुने तर्क दिएका थिए।
उनले स्थिर सरकार, धनात्मक शोधनान्तर र उच्च आर्थिक बृद्धि दर हाँसिल भएका बेला मात्र पुनरावलोकन गर्न सकिने तर्क गरेका थिए। उनले भनेजस्तै अहिले स्थिर सरकार र उच्च आर्थिक बृद्धि दर हाँसिल भएको छ। तर आयात उच्च भएका कारण शोधनान्तर ऋणात्मक छ। डलर महँगिदै जाँदा नेपाली र भारुबीचको विनिमय दर पुनरावलोकनको विषय यसपाली भने वहशमा छैन।
पछिल्लो समय भरतमा आयात फराकिलो हुँदै गएको छ। आयातका लागि उसँग भएको विदेशी मुद्राको भण्डारणमा पनि कमी आएको छ। यसले गर्दा डलरको माग बढेर भारु कमजोर भएको विश्लेषण सञ्चार माध्यमहरुले गरेका छन्। यसैसन्दर्भमा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा झिकेर फिर्ता लैजान थालेको पनि समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्।
नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो, नेपाली भान्छा महँगिने, विनिमय दर परिवर्तन होला? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।